Yini ongayibona eSingapore?
I-Singapore , i- "Mecca" yezokuvakasha zanamuhla, minyaka yonke idonsela inani elikhulu lezivakashi ezivela emhlabeni wonke. Konke mayelana ne-plexus engavamile yeziko zaseMpumalanga ne-induduzo yaseYurophu. Ngakho-ke, kuleli dolobha-dolobha awukwazi nje ukuba nesikhathi esiningi ogwini, ukubhukuda ekuzululeni kwamanzi olwandle. Kunezindawo eziningi lapha, nakanjani kufanele uqaphele. Ngakho-ke, sizokutshela ukuthi yini ongayibona eSingapore.
Enhliziyweni yomuzi yi-Merlayon, uphawu lweSingapore. Lesi sitshalo setshe lesikhumbuzo siyisidalwa esingengqungquthela esinenhloko yengonyama nesiqu senhlanzi. Lesi sikhumbuzo sihlanganisa umlando omfushane waseSingapore, okuvela emzaneni omncane owaphenduka umuzi onamandla kakhulu. Ngendlela, igama elithi "Singapore" lihunyushwa ngokuthi: "idolobha lezingonyama".
I Wheel Wheel eSingapore
Enye yezinto ezikhangayo kakhulu edolobheni kungabizwa ngokuphepha ngokuthi i-Singapore Flyer - isondo elikhulu lokubona. Ekuphakameni kwayo (165 m), kwafinyelela ukuheha okudumile eLondon, eLondon Eye, ku-30 ​​m. Isondo, eliphakathi nendawo yeMarca Bay, linamakamelo angu-28 ahamba ngezinyawo, enikeza umbono omuhle we-panorama yaseSingapore, kanye neziqhingi zaseMalaysia Indonesia. Ubude ohambo olungavamile luyimaminithi angu-30.
I-Universal Park eSingapore
Ipaki yokuzijabulisa yaseSingapore evela kwi-Universal Studios itholakala esiqhingini saseSentosa. Lena indawo enhle yokuphumula, etholakala endaweni engamahektha angu-20, inikeza izikhangisi ezingu-24. Insimu yonke ye-Universal Park ihlukaniswe ngezigaba ezingu-7, lapho izivakashi zizokwazi khona "ukuhambela" i-Hollywood Boulevard, ubone i-Walk of Fame, uchithe izinto ezithengisa kakhulu endaweni yokuthenga, ubone isiteshi seSteven Spielberg, uhlangabezana nokuzwa okungakaze kwenzeke phezu kwe-roller coaster nokunye okuningi.
Izikhangiso eziyinhloko zaseSingapore zihlanganisa impilo yasolwandle iMarine Life Park, enkulu kunayo yonke emhlabeni. Kuyo ungabona izakhamuzi zasolwandle ezingaphezu kuka-100. Kukholelwa ukuthi inyamazane yasolwandle isesimweni esiseduze nemvelo ngangokunokwenzeka. Ngandlela-thile, ngaphezu kwezokuvakasha okungaqondakali lapha ungakwazi ukuzijabulisa e-Adventure Cove Waterpark, epaki yokuzijabulisa emanzini. Kukhona ama-hydromagnethi, amaslayidi ayisithupha amanzi, umfula we-adventure kanye ne-bay amanzi aluhlaza. Zombili izinto zitholakala - i-oceanarium nepaki eSentoz, eSingapore.
Umthombo Wezimpahla eSingapore
Enhliziyweni yaseSingapore, eduze nendawo yokuthenga iSuntec City iphakamisa umthombo omkhulu kunazo zonke emhlabeni - uMthombo Wezimpahla. Ukwakhiwa ngokwemithetho kaFeng Shui, isakhiwo siyindandatho yethusi, ephakanyiswe ngaphezu komhlaba ngenxa yemilenze emine yethusi. Umthombo umelela ukuvumelana, ubunye obungokomoya futhi ubonakalisa ingcebo. Kusihlwa, umthombo uthakazelisa nge-laser show nomculo ojabulayo.
Bird Park eSingapore
Emthambekeni osentshonalanga we-Djurong intaba enkulu kunazo zonke epaki yase-Asia. Kukhona izinhlobo eziyizinkulungwane eziyisithupha zezinyoni, lapho kuzo zonke izinhlobo amandla abasebenzi bepaki avuselela indawo yawo yokuhlala.
Izindawo zokuhlala eSingapore
Ukuze kube lula, imiphakathi yobuhlanga yasungulwa eSingapore ukuze ihambise abantu. Ngakho, isibonelo, e-Chaitown, kubonakala sengathi uphakathi kwe-China ephakathi. Lapha ungakwazi ukuthenga imikhosi engabizi nemikhiqizo engekho yendabuko, bheka ithempeli laseNdiya lasendulo kakhulu - iSri Mariamman. Indawo yaseNdiya encane ibhekene nombala wayo nobuhle obucacile. Abavakashi bazoba nesithakazelo emasontweni aseVera Kaliaman naseSrinivasa Perumal, ezitolo zase-Indian bazaar nezitolo zokuhlobisa. Kufanelekile ukuhamba nge-Arabhu Street ukuthenga ubulika, ubucwebe kanye nenhloko yezinhloko ngamanani angcono futhi ulalele ukudla okuvamile kwe-Arabhu.
Qasha imoto eJapane
Iziphethu Ezishisayo zaseNingizimu Korea
Kungcono nini ukuya eJapane?
Ikhadi lokuvakasha Ez-Link
Indonesia - Ukuphepha
Izindawo zokuhlala eCambodia olwandle
Ngiziphi izingubo okufanele ngizithathe eCambodia?
Izindlu zezinkuni ezivela ezigodini
I-Melanoma yesikhumba - izibikezelo zokuphila
Ungondla kanjani i-hedgehog ekhaya?
Ummbila ophekwe ngokulahlekelwa isisindo
Vareniki nge-sauerkraut - iresiphi
Ikusasa lomuntu - lixhomeke kuphi nokuthi ungayishintsha kanjani?
Indlela yokunquma yobudala bezinyane?
I-Cherry jamu - iresiphi
Gqoka phansi nge-cut from the hip
Imemori njengenqubo yengqondo
I-Kiparisovik - ukutshala nokunakekelwa
Iziketi zeMfashini 2016
Yini okufanele ngiyiphekele isidlo se-gala?
Kungcono nini ukuya eVietnam?
I-blackmail nokuphanga - indlela yokuziphatha ne-blackmailer?
Yiziphi amavithamini asekhabishi?